Ungayithola kanjani amagama angukhiye ephezulu wokusesha we-Amazon ukufakwa ohlwini kokubheka?
Uma unomkhiqizo okwazi ukuthengisa ku-Amazon, kufanele futhi ube necebo elihle lokulidayisa. Udinga ukwenza amakhasimende akho angase athenge imikhiqizo yakho ngokuqondile kunomncintiswano wakho we-market niche. Ngaphansi komkhankaso wakho wokwenza ngcono, udinga ukuqhuba ucwaningo olunzulu lwegama elingukhiye - joyetech vape tanks. Ukuze ukwenze ngendlela efanele ungase uqashe uchwepheshe endaweni ye-Amazon yokuthuthukisa noma usebenzise isofthiwe ekhethekile yokucwaninga ngegama elingukhiye. Kubalulekile ukuthola yonke imigomo yokusesha ngesikhathi esisodwa, ukuba ungabuyeli kule nhloko esikhathini esizayo. Ukukhohlwa amanye amagama angukhiye obalulekile kungabangela imali, futhi amathuba amasha alahlekelwe. Amagama angukhiye anomsindo ophezulu wokusesha ku-Amazon azokusiza ukuba ume kangcono kunabancintisana bakho futhi wenze ukuthengisa okungcono.
Kulesi sihloko, sizoxoxa ngamasu amakhono okwenza ucwaningo olunzulu lwegama elingukhiye futhi sithuthukise ukubonakala kwakho kokufakwa kuhlu ku-Amazon. Ngaphezu kwalokho, sizoxoxa ngamathuluzi okucwaninga angamagama angukhiye azosiza njengenhlangano eyengeziwe ekusebenzeni kokuhlelwa kwezinhlelo zakho ze-Amazon. Ucwaningo lwamagama angukhiye e-Amazon
Ucwaningo lwegama elingukhiye luyingxenye ebalulekile yohlelo lwakho lwe-Amazon lwe-intanethi. Ihlanganisa ukucinga yonke imigomo yokusesha efanele futhi ehlosiwe yomkhiqizo oqondile. Amagama amaningi okucinga amavolumu yilawa magama amakhasimende akho angase asetshenziselwe ukuthola umkhiqizo wakho ekhasini lekhasi le-Amazon search.
Ucwaningo lwegama elingukhiye lomsebenzi kufanele lufake imisebenzi efana nokuhlaziywa kwe-market niche, ukuhlolwa kwezimali nokuhlaziywa kokuncintisana. Ngaphezu kwalokho, udinga ukuhlaziya ukuziphatha kwe-shopper ukuze uqonde ukuthi yini abayifunayo ezimweni eziningi.
Njengomthetho, akunakwenzeka ukuqoqa yonke le miningwane ngesandla. Yingakho abathengisi abaningi be-intanethi bevame ukusebenzisa isofthiwe ye-intanethi.
Ngincoma ukusebenzisa amathuluzi alandelayo ngoba angakunikeza idatha enembile kakhulu:
Ithuluzi elisetshenziswe kakhulu lamagama angukhiye ucwaningo yi-Google Keyword Planner. Ungasebenzisa idatha enikeziwe yile thuluzi njengommeleli we-Amazon yakho yokuqukethwe kokuqukethwe. Kodwa-ke, udinga ukuqaphela ukuthi i-Amazon usezingeni uhlelo luhlukile kakhulu ku-Google eyodwa. Yingakho iziphakamiso zegama elingukhiye, uzothola usebenzisa leli thuluzi, ngeke liqonde. Udinga ukusebenzisa ezinye izihlungi ze-Amazon ukuthola isithombe sezinhlobo nezinombolo zokuseshwa ezenzelwe imikhiqizo e-Amazon. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza. Inikeza idatha ye-autosuggest ye-Amazon, i-Google, i-YouTube, ne-Bing. Kulula kakhulu uma ungathanda ukuqhathanisa umehluko wendlela amakhasimende akho angase afune ngayo kuzo zonke izinhlelo zokucinga.
Leli thuluzi lingakwazi ukuzitholela ngokwengeziwe imigomo yokucinga yesikhathi eside ngokufaka igama elingukhiye olifakile kusistimu yalo. Uma ukhetha yonke imiphumela ephakanyisiwe bese uchofoze inkinobho yokusikisela, ithuluzi ligijima zonke iziphakamiso zegama elingukhiye emuva ebhokisini lokusesha le-Amazon. Lolu cwaningo luzohlinzeka ngemishwana eqondile ye-autosuggest.
I-Amazon Niche Analyzer
Uma usanda ku-Amazon futhi ufuna ukunquma ukuthi iyiphi i-market niche ehambelana kakhulu nezidingo zebhizinisi lakho, i-Amazon Niche I-Analyzer yilokho okudingayo. Kuyasiza ukunquma ukuthi yimiphi imikhiqizo ongayithengisa ngayo nokuthi yiyiphi intengo. Ngaphezu kwalokho, usebenzisa leli thuluzi, ungakwazi ukulinganisa ukuthi uzothola malini amaholo.
Ukwengeza, leli thuluzi lizokusiza ukulandelela amasu omncintiswano wakho nezikhundla zezinga. Ungakwazi ukubona isamba sabo samanani, ukuqapha igama elingukhiye уranking futhi ulinganise imali yokuthengisa.
I-Semrush iyisofthiwe yokuthuthukisa ubuchwepheshe esetshenziselwa izinhloso eziningi zokuhlanganisa nokufaka ngegama elingukhiye. Leli thuluzi lingakunikeza ngemigomo yokucinga efanele futhi ehlosiwe ngemizuzu embalwa nje. Ngaphezu kwalokho, kubonisa amagama angukhiye omncintiswano nokuthi bawabeka kanjani. Konke okudingayo ukukopisha i-URL yohlu lomncintiswano wakho, futhi Ithuluzi le-Semrush lizokunikeza wonke amagama angukhiye oyedwa ababeka kuwo.
Kungenzeka kanjani ukuthi ucwaningo lwegama elingukhiye lwandise ukuthengisa kwakho ku-Amazon?
Imikhiqizo yakho ye-Amazon izoboniswa kukhasi lemiphumela yokusesha uma uhlu lwakho luqukethe wonke amagama angukhiye ikhasimende elifakiwe embuzweni wosesho. Uma ulahlekelwe okungenani igama elilodwa, umkhiqizo wakho awumeli ithuba lokuvela emiphumeleni yosesho, futhi ngemva kwalokho, uzolahlekelwa kulowo mthengisi.
Umgomo oyinhloko wokucwaninga ngegama elingukhiye ukwakha uhlu lwawo wonke amagama okucinga ahambisana nomkhiqizo othize. Uma ungakwazi ukufaka ngokuyinhloko i-high search volume Amazwi angukhiye e-Amazon ohlwini lwakho lomkhiqizo umbhalo, ucwaningo lwegama elingukhiye luzoholela ekutheni amakhasimende amaningi azobona umkhiqizo wakho, chofoza kuwo futhi ekugcineni abe amakhasimende akho akhokhelayo.
Ungayithola kanjani imigomo yokufuna ivolumu ephakeme yemikhiqizo yakho ye-Amazon?
Ukuwa kokuqala, ngingakhuluma ukuthi udinga ukulungiswa uma wenza ucwaningo lwegama elingukhiye ngemikhiqizo yakho. Kuzokusiza ukuba uqonde futhi ungalahlekelwa yiluphi ulwazi olubalulekile. Ukuqoqa amagama angukhiye ngezigaba ezahlukene kuzokusiza ukuba uhleleke, futhi uqonde. Lawa mazwi angukhiye angaba okuyisisekelo nesekondari. Amagama angukhiye ayisisekelo yiwo ahambisa umkhiqizo oyinhloko. Kungaba amagama okucinga achazayo achaza umkhiqizo futhi afune izici zayo ezibalulekile. Amagama angukhiye wesibili angamagama amaningi okucinga angasetshenziswa lapho efuna amagama angukhiye oyinhloko. Ingasetshenziswa kumazwi aphathelene neqembu elithile elihlosiwe, uhlobo lomuntu, uhlobo lokusetshenziswa, noma ezinye izici zomkhiqizo.
Ngakho, ukuze wenze ucwaningo lwakho lwegama elingukhiye lube nomphumela, kufanele uhlukanise yonke imigomo yokusesha ephakanyisiwe ngezigaba ezimbili eziyisisekelo - okuyisisekelo nesekondari. Ngokuhamba kwesikhathi, kuzokusiza ukuba uhlanganise nezinhlanganisela zosesho ezifanele kakhulu ezingathuthukisa isamba sakho se-Amazon.